စပယ်တွေ ပွင့်ပြီ.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မိုးမခ က ယူသုံးလိုက်မည်။ ဘယ်အပင်လဲဗျ။ နောက်ဖေး မီးဖိုခန်းအ၀င်က ဖိနပ်ချွတ်နားက အိုးနဲ့အပင်လား ... ရစ်
စံပယ်တွေ ကတော့..ပွင့် နေ ဦးမှာ ပါပဲ။
လွမ်း ရတဲ့..စံပယ် ပန်း တွေ ကနေ-
လန်း ရတဲ့.. စံယ်ပန်း လေး တွေ ဖြစ်ပါ စေ တော့-
ဒီတခါကတော့.... ပန်းစပယ် နန်းလယ်မပေါ်ခိုက်ဟာမို့...ဆိုတဲ့ ကဗျာနဲ့ ပြောင်းပြန်နော်။ အဓိပ္ပါယ်လည်း ပြောင်းပြန်ဘဲ။
“ဝေးခဲ့ပေါ့ဌာနေ တို့တိုင်းပြည်.... ခြုံလွှာထွေး မလုံသေးပေ.... မွန်းတဲ့နေခြည် ဖြာမှနွေးတဲ့...တရေးရေး....တွေးလေ ဆွေးမပြေ....ဖြေသော်လည်းမပြေ....လက်ဝဲသုန္ဒရ တမ်းတစိတ်ဘ၀င်ငယ်ပုံဖြစ်ထွေ...ပြည်တော်ကိုသာ...စိတ်ထဲမျှော်မှန်း ရော်ရမ်းကာသာနေ........သြော်..လွမ်းတိုင်းတွေးမိကာပင်....ဆွေးမိပေ...”ဆိုတဲ့ ဒေါ်မာမာအေး လက်ဝဲသုန္ဒရ သီချင်းလေးကိုတောင် သတိရတယ်။
အမရေ.. အမစာအားလုံးကို သိမ်းကျုံးပီးဖတ်သွားပါတယ်.။
ကော်မန့်တော့ ထားခဲ့တော့ဘူး အချိန်မရှိလို့။
အမ.. စပယ်ပန်းလေး ၂ပွင့်လောက်ပေးပါ။ အိပ်ယာဘေးမှာထားချင်လို့
လွမ်းရတာတော့ တကယ်ပါ။ ခြင်ကိုက်တဲ့ အကြောင်းတောင် လွမ်းမိတဲ့ထဲပါတယ်။ နားနားကပ်ပြီးတ၀ီဝီနဲ့ အိပ်မရအောင်ပေါ့။ရှာရင်လဲမတွေ့ ဖမ်းရင်လဲမမိ။
အမ ခုအိမ်ရှေ့မှာလဲ စံပယ်ရုံလေးနဲ့ ချိုသင်းရဲ့.. စပယ်ပန်းနံ့က မွှေးတော့ လာတဲ့ လူတိုင်းက သူ့ကိုသတိပြုမိကြတယ်။ အင်း ... ဘာကိုပဲ မြင်မြင်ပါ .. အမလို နီးနီးလေးတောင် အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဖြစ်သေးတာပဲ... ချိုသင်းတို့ ဆို .. ပိုဆိုးတော့ မပေါ့။
မမိုးချိုသင်းရေ.... လောင်းတဲ.ရေတွေများလွန်းလို့ အပင်လေးသေသွားတော့မှာပဲလို့ ထင်နေတာ.. တော်သေးလို.ပေါ့။ စပယ်ပွင့်တွေလား။ အလွမ်းပွင့်တွေလား။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး အစ်မရယ် ..လွမ်းလိုက်တာ အမိမြေကို
စပယ်ပင်တွေစိုက်ထားပြီး အဲလိုလွမ်းတိုင်းသာ ရေလောင်းမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ပန်းရောင်းစားလို့ရလောက်တယ် အမ ရေ...
BTW: You can contact my email @ peti.kool@gmail.com. Thanks :)
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ အမရဲ့ အချစ်ဆုံးကြီး အကိုက `ဟာသတွေ ရေးနေတာလား´ လို့ မမေးလောက်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ တခွက်...၊ တခွက်...၊ နဲ့ လောင်းနေတဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရတာ ပြုံးမိသေးတယ်။
တစ်ခွက် တစ်ခွက်နဲ့ မချိုသင်းရဲ့ စံပယ်ပင်လေး ရေလောင်းများလို့ သေပြီ မှတ်တာ။ ပွင့်လာတော့ ကောင်းတာပေါ့။ စံပယ်တွေ ပွင့်ကုန်ပြီဆို ပုံရိပ်လည်း လွမ်းလာသလိုပဲ။
လွမ်းတယ် အစ်မး(
မ… ဒီကဗျာလေးကိုတော့ အတော်ကို ကြိုက်လွန်းလို့သိမ်းထားလိုက်ပြီ… ရင်ထဲက အလွမ်းတွေသာ ပန်းဖြစ်ရင် မ ရယ် နေရာတိုင်းမှာ ပန်းတွေနဲ့ ဝေ….
ကဗျာလေးရော အမရေးတာလေးတွေရော ဖတ်ပြီး လွမ်းလိုက်တာ အမရေ။ ဘယ်အချိန်ထိများ လွမ်းကြရမှာလည်း မသိဘူးနော်။း(
စာရေးဟန်လေးရော တွေးပုံလေးရော စိတ်ရင်းကိုထင်ဟပ်တာမို့ ဖတ်လို့သိပ်ကောင်းပါတယ်။